Korneel Qadaafi: Daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshiisa iyo sidii loo qabtay - Bulsho News
Dhowr sababood oo aan loo xusi karin dhalashada Nebiga CSW---...
Sir David Amess: Cali Xarbi oo loo haystay dilka xildhibaanka...
Korneel Qadaafi: Daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshiisa iyo sidii loo qabtay
Qadaafi waxaa loo arkayay inuu ahaa nin maamulkiisu istiraatiiji yahay oo ay u dul qaadanayeen shacabkiisa in ka badan inta loo dul qaatay madaxda kale ee carabta. Laakiin ma uusan ahayn hoggaamiye u janjeeray dhinaca dalalka reer galbeedka, sida madaxda kale ee carbeed.
Wuxuu geerida ula kulmay qaab bah-dil ah kaddib markii xoogaggii mucaaradka ee NTC ee ka soo hor jeeday maamulkiisa, ay heleen isagoo ku dhuumanayay biyo mareen dhulka hoostiisa ah.
Daqaqadihii noloshii korneel Qadaafi
Ka dib dhicitaankii xukuumaddii Tripoli ee 28-kii Ogosto 2011, magaalada Sirte waxay sii ahayd mid ka mid ah goobihii ugu dambeeyay ee iska-caabbinta ay ka sameeyeen ciidamadii daacadda u ahaa Qadaafi.
Saacadihii hore ee Khamiistii ee 20-kii October 2011, Korneyl Qadaafi, oo ay la socdeen ciidamo daacad u ah, ayaa go’aansaday in uu isku dayo in ay xoog ku galaan Degmo labaad.
Kolonyadii la socotay waxaa ku jiray wiil uu dhalay Qaddaafi oo lagu magacaabo Mutassim iyo madaxa ciidamada Abuu Bakar Yoonis Jabr. Labada nin ayaa markii dambe la sheegay in ay goobta ku dhinteen, isla markaana Meydka Mutassim laga tusay TV-ga Liibiya.
Qadaafi qudhiisa “inta badan waqtigiisa wuxuu ku qaatay akhrinta Quraanka iyo tukashada”, sida laga soo xigtay Mansuur Dhao, oo ahaa madaxixii Ilaalada Shacabka.
“Isgaarsiintii uu la lahaa adduunka waa la jaray: Ma jirin telefishan, waxaan u dhexayn jirnay hurdo iyo soo jeed. Wax la sameeyo ma lahayn.”
Diyaaradaha NATO waxay markaas ku rideen kolonyada Qadaafi laba bambo, waxayna burburiyeen 14 baabuur, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 53 qof, waxayna ku qasbeen Qaddaafi iyo ilaaladii gaarka ahayd in ay dib u gurtaan, kuwaas oo dhammaantood badbaaday.
Waxay gabaad ka dhigteen dhisme ku dhow, laakiin waxay mar kale la kulmeen rasaas xooggan oo ay ridayeen maleeshiyaadka.
Qof badbaaday ayaa markii dambe sheegay inuu arkay Qadaafi oo halkaas jooga, “isagoo xiran koofiyad iyo jaakad aan xabbadu karin, gacantana ku sita bastoolad.”
Mansuur Dhao ayaa ku qanciyay taliyihiisa in ay maraan waddada weyn iyagoo adeegsanaya tuubooyin biyo-mareen ah, waxayna rajaynayeen inay gaaraan goobaha ammaanka ah ee beeraha dhinaca fog ee magaalada Sirte.
Balse isla markii ay soo baxeen, maleeshiyaad ayaa ku yimid oo weerar ku billaabay. Ilaalada Qadaafi ayaa tuuray bam-gacmeedyo si ay isaga caabiyaan maleeshiyada, balse bambadii 3-xaad oo ay tuureen ayaa dib ugu soo laabatay, oo ku dhex qarxday waxayna bambadaasi dishay waardiyihii Qadaafi ee tuuray, taas oo xitaa sababtay in madaxweyne Qadaafi madaxa ka dhaawacmo.
Dagaalamaasha maleeshiyada ayaa ku soo daatay tubooyinka uu Qadaafi ku dhuumanayay, iyagoo ku rajo weynaa inay halkaas ka heleen Qadaafi.
“Waa xilliga uu Qadaafi aadka u xanaaqay. Wuxuu aad uga xanaaqay in isgaarsiin la’aan iyo koronto la’aan ay jireen. Awood uma uusan lahayn in caalamka kale uu la xiriiro,” ayuu yiri Mansuur.
“Markii xoogaa uu aamusnaadaba, wuxuu ina waydiinayay ‘Korontada maxaa ku dhacay? Biyaha maxay u go’an yihiin?”
Korneel Qadaafi iyo rag faro ku tiris ah ayay u suurta gashay in ay lug ku baxsadaan waxayna magan-galyo ka raadiyeen laba tuubo oo waaweyn oo biyo-mareen ah oo qashina uu ka buuxay inkastoo ay ciidamada fallaagada ay markaas xireen.
Waxaa xigay saddex daqiiqo iyo 38 ilbidhiqsi, oo aad xaaladda u adkayd: “Xaaladda waxay ahayd mid qasan,” ayuu qirtay taliyaha maleeshiyada deegaanka Khaalid Axmed Raacid. “Waxay ahayd goob aad halis u ahayd”.
“Waxaa la saaray afka hore ee gaari xamuul ah oo isku dayay inuu kaxeeyo balse wuu ka dhacay. Aad buu u jahawareeray. Dad ayaa timaha jiidayay oo garaacayay.”
Waxaan fahamnay in loo baahan yahay in maxkamad la saaro, laakiin qof walba isma xakamayn karin. Ugu yaraan laba saacadood, waxay u ahayd “hubaal ah inuu dhintay.”
Markaa ugu dambayntii Qadaafi waxaa la saaray ambalaas, wuxuu ka qawnaa qeybta kore waxaana muuqatay in uusan nooleyn, markii la keenay Misrata, oo ah safar ugu yaraan laba saacadood ah qaatay. “Dhab ahaantii wuu dhintay”.
Ka dib dunida waxay aragtay muuqaalka Mucaamir Qadaafi iyo daqiiqadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Waxaana weli geeridiisa ku gedaaman arrimo badan oo aan kala caddeyn sida ay u dheceen.
Sidee Qadaafi loo qabtay?
Korneel Qadaafi waxaa la qabtay xilli galab ah.
Waxaa la aaminsan yahay in muuqaalka laga duubay laga dhex arki karay in xabad lagu dhuftay oo la dilay.
Telefishinka al-Jazeera ayaa xilligaas baahiyay muuqaallo laga arki karay Qadaafi oo jahwareersan, dhaawacna ah, iyadoo dagaalyahannadii mucaaradka ay dhulka ku jiidayeen.
Dagaalyahan ka mid ahaa mucaaradka, Salem Bakeer, wuxuu Reuters u sheegay: “Marka hore waxaa ku tuurnay madaafiic, balse way shaqeyn waayeen”.
“Ka dib mid ka mid ahaa raggii Qadaafi ayaa soo baxay wuxuuna haatiyay gacantii uu qoriga ku haystay… Ka dib markii uu i arkay, wuxuu billaabay in uu xabado nagu soo rido. Waxaan u maleynayaa in Qadaafi uu ku amray in xabadda uu joojiyo. Ka dib wuxuu dhahay ‘Mucaamir Qadaafi halkan ayuu joogaa wuuna dhaawacmay'”.
Salem Bakeer wuxuu yiri: “Gudaha ayaan galnay, waxaanna bannaanka u soo saarnay Qadaafi. Wuxuu dhahayay ‘Maxaa khaldan? Maxaa Khaldan? Maxaad sameyneysaa?’ Ka dib waxaan saarnay gaari.”
Mid ka mid ah malleeshiyadaas ayaa weriyeyaasha tusay bastoolad dahab ah oo uu sheegay in Qadaafi uu ka qaatay.
Sawirro falanqeyn lagu sameeyay iyo muuqaallo laga qaaday xilligii ugu dambeeyay ee nolosha Qadaafi, waxay muujinayaan in gadaal laga geliyay qori ama middi.
Ka dib wixii dhacay iyo sidii uu u dhintay hoggaamiyihii Libya weli ma cadda. In kastoo taliyihii watay ciidankii qabsaday Qadaafi uu sheegay in gaari ambalaas ah uu ku dhex dhintay, wuxuuna ku dooday in uu u dhintay dhaawacyo rasaas soo gaaray intii dagaalka uu socday.
Balse nin sheegtay in dhacdada uu goobjoog u ahaa, wuxuu BBC u sheegay in xabad caloosha looga dhuftay Qadaafi. Waxaana jiro muuqaal laga arkay maydka Qadaafi oo lagu jiidayay jidadka Misrata.
Madixii Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobeey ee sannadkii 2011, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in baaritaan buuxa lagu sameeyo sidii uu Qadaafi u dhintay.
Cristiano Ronaldo Oo Bar-Bareeyay Rikoodh Uu Sergio Aguero...
John Terry Oo Saadaaliyay Kooxda Laga Yaabo In...
Midowga Musharraxiinta oo ka hadlay shaki la sheegay...
SpaceX returns 4 astronauts to Earth, ending 200-day...
Jadwalka kuraas ka mid ah golaha shacabka oo...
Laba qarax oo ka dhacay magaalada Kampala
Maxay tahay qaaylo dhaanta degdega ah ee ka...
World Cup host Qatar used ex-CIA officer to...
Wasiirka Caafimaadka Oo Dhagax Dhigay Cusbitaal Laga Hirgelinayo...